Alahady 29 Novambra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady faha-29 Novambra 2020
Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Miandrandra Famonjena ny mino”
RAJAOFETRA Philipe no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miza-draharaha Pasteur Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny vaomieran’ny aim-panahy no tompon’andraikitra tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana.
Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.
Ny Salamo 121 no tenin’Andriamanitra nisongadina.
FANOMBOHANA NY FOTOANA:
Ny Salamo 113,1-3 no niarahana namaky ho fiderana an’Andriamanitra.
tahorian’izay dia niarahana niredona ny FFPM 438, 1-3
Ry Rainay izay any an-danitra ô,! Midera sy misaotra ary manome voninahitra anao izahay amin’ity anio ity raha tafahaona eto an-tranonao noho ny fitiavanao anay ka afaka miombona amin’izaofanompoam-pivavahana izao. Ny fahaxsoavanao no naha toa izao anay ka izany indrindra no hideranay anao Mpahary sy Mpamorona anay. Misaotra Anao izahay Tompo noho ny fitiavanao anay ka nitehirizanao anay nandritry ny herinandro lasa iny; koa raha tafavory eto izahay noho ny Anaranao, dia mangataka ny hanatrehanao izao fanompoam-pivavahana tanterahinay izao; Aoka ny fanahinao Masina hiasa manan-kery aty aminay hahaizanay manolotra ny tenanay ho Anao. Dia hahazo aim-panahy vaovao tokoa izahay ho entinay mamakivaky ny fiainanay ary hitombo finoana. Ka izay rehetra ataonay anie dia isehoan’ny voninahitrao ary ho hanitra ankasitrahana eo anatrehanao. Ataonay ny vavakay amin’ny anaran’I Jesoa Kristy Mpamonjy anay. Amen
Jesoa ô, misaotra Anao izahay noho ny fotoana rehetra atolotrao anay. Tolory ny Fanahinao Masina izahay ahafahanay mandray ny fampianarana mahasoa avy aminao.
Ny Jakoba 3,14b no nangalana ny hafatry ny Tompo “Aza mirehereha na mandainga manohitra ny marina”
Mihevi-tena ny ho endry sy marina ny olona rehefa avy nanovo ny fahalalan’izao tontolo izao. Izany dia miteraka fireharehana, fitaka, fanaratsiana, ary fahotana sy fikorontanana.
Ny toe-panahy araka an’Andriamanitra azo avy amin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia mitarika any amin’ny fahamarinana. Izany toetra mendrika izany dia mitondra amin’ny fitahiana sy famonjena.
AZony sy fikiro ny fahendren’Andriamanitra fa aza mikaroka ny fahendren’izao tontolo izao manàna ny toetran’Andriamanitramanao ny marina sy tsy tia mandainga.
Tahorian’ny hafatra fohy dia nohiraina ny FFPM 452,1 narahana vavaka
Tompo ô, Saotra dera laza ary voninahitra no atolotray Anao noho izao fotoana izao. Arotsay aminay ny Fanahinao Masina ahafahan’ny mpanomponao manambara aminay izay sitrakao ary ho tafita soa aman-tsara aty aminay anie ny teninao ka itoetra aty anatinay Amen.
Nialoha ny toriteny dia niarahana niredona ny FFPM 636,1-2
Ny Salamo 121 no nangalana ny toriteny.
Ny Salamo 121 dia Salamo fiakarana izay ventesin’ny zanak’Israely rehefa hanao fivahinianana Masina any Jerosalema.
Mamakivaky lalan-tsarotra ireto zanak’Israely ireto rehefa hamonjy ny tendrombohitr’I Ziona satria sarotra ny lalana noho ny alaviran’ny lalana izay mahavizana ampian’ny tanin’andro izay mandoro.
Ankoatr’izay dia hodidinin’ny vohitry ny fahavalon’ny zanak’Andriamanitra ny lalana diaviny. Ireto fahavalo ireto dia ikohizana amin’ny fanomoan-tsampy.
Manoloana izany fahasarotabna izany dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe “Avy aiza ny famonjena ny Israely manoloana ireo fahavalo marobe.
Avy amin’I Jehovah ny famonjena ny olony.
Andriamanitra no naharty izao tontolo izao ary mikarakara ny asan’ny tanany Izy. Mitoetra mandrakizay ny Tompo ary mitana ny fanekeny amintsika. Miara monina amintsika Izy ary Izy no rain’I Jesoa Kristy izay Mpamonjy antsika.
Ny tendrombohitr’i Ziona moa dia avo. Eny am-pandehanana dia mahatazana ity Tempolin’Andriamanitra ity ireto mpanao fivahinianana masina ireto ka na dia sarotra azan y lalana dia mamelona ny fanantenany ny fahatazanany ny tendrombohitr’I Ziona.
Mitaona antsika hibanjina ny bfamonjen’Andriamanitra ity Salamo ity.
Raha tojo fahasarotana ianao dia aza mandeha amin’ny lalan-diso fa mitrakà ka tadiavo ny Tompo.
Tsy mba mila fohazina sahala amin’ireo andriamanin-kafa ny Tompontsika fa mitsinjo antsika mandrakariva Izy.
Eto Madagasikara dia anisan’ny mampihoro-koditra ny mosavy. Tsy mandaitra amintsika kristiana ireny satria fahavalo efa resy ireny. Tsy maintsy misy ny fitandremana atao toy ny fandehanana milamina sy fanaovana fanosorana fanafody fiarovana amin’ny hain’andro rehefa mandeha tadidio anefa fa Andriamanitra irery ihany no fiarovana azo antoka.
Nanomboka tany am-bohoka ka mandram-pahatonga antsika any amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia Andriamanitra no mitanana antsika.
Maneke an’Andriamanitra amin’ny alehanao rehetra, Izy no Mpiaro anao mba tsy ho tafintohina. Mandram-pahatapitr’izao tontolo izao dia miaro antsika ny Tompo.
Andrandrao ny famonjen’Andriamanitra fa izay eo an-tanany dia tsy misy maharombaka.
Menatra izahay raha nandre ny teninao teo Andriamanitra ô! Fa izay nifanipaka tamin’ny sitraponao mihitsy no vitanay; teo imolotra fotsiny ihany mantsy no nanekenay an’I Jesoa Kristy Zanakao ho Mesia Mpamonjy sy Mpanavotra anay ary Mpanalalana anay Aminao. Na ny fahefany na ny teniny dia samy efa nolavinay avokoa. Nataonay tsinontsinona ihany ko any rà nalatsany teo amin’ny Hazo Fijalian ho fanadiovana anay amin’ny fahotana ka mbola ny ratsy hatrany no ifikiranay;
Mifona Aminao izahay ankehitriny ary mangataka ny haùelanao ny helokay;
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy fifonana izany vavaka izany.
Tahorian’ny vavaka dia nohiraina ny FFPM512,1-2
“Ampaherezonao ny tanana miraviravy, ary hatanjao ny lohalika malemy; lazao amin’izay reraka am-po hoe: Mahereza,aza matahotra, indro Anriamanitra ho avy ka hamonjy anareo.
Dia ampahiratina ny mason’ny jamba,ary hampaladina ny sofin’ny marennina; dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa. Aryhihoby ny lelan’ny moana. Fa hiboiboika any an’efitra ny rano; ary hisyrenirano avy any amin’ny tany karankaina.”
Voavelany helokareo noho ny anarany masina; Haleloia. Amen
Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen
Ho fanambarana ny finoan’ny mpianakavin’ny Tompo dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany ary tao arinan’izay dia nanao ny anjara hirany ny STK
Manomboka ny Alatsinainy 30 Novambra ny erinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Tokanana amin’io andro io ny tsangam-bato faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena.
Ny alahady 6 Novambra no ivom-bokatra ka toa izao manaraka izaony fandaharam-potoana mandritra ity erinandro ity:
Ny lohahevitra banjinina amin’izany dia “ FIANGONANA MANAO AHOANA NO ILAIN’NY FIRENENA MANOLOANA NY RIVOTRA MARO MITSOKA” ka mandritry ny erinandrom-bokatra dia hisy ireto famelabelaran-kevitra ireto ho karakarain’ny sampana
Alatsinainy 30 Novambra 17h45 “Hasin’ny Famonjena manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Talata 01 Desambra 17h45 “Kristiana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Alarobia 02 Desambra 17h45 “Tompon’Andraikitra manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Lakamisy 03 Desambra 17h45 “Mpitondra firenena sy mpitondra fivavahana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Ny zoma ariva amin’ny 17h45 kosa dia hisy ny fanompoam-pivavahana.
Ny Sabotsy 05 Novambra amin’ny 6 ora maraina kosa dia hisy ny maraim-baovao.
Ny Alahady 06 Desambra tolakandro kosa dia hisy ny antsan-kira.
Ho mariky ny fiarahana mifaly dia ho tontosaina ny 21 Febroary any amin’ny espace “Yandi By-pass” ny fiaraha-misakafo.
Ny Sabotsy ariva dia tsy miova ny fotoanan’ny mpitaiza tanora (SAMPATI, TANINKETSA)
Ny Alahady ariva kosa no fotoam-pivorian’ny STK
Nentanina ny mpianakavin’ny finoana manoloana ny fanomezan-tanana ho fanampiana nireo tratry ny Kere any Atsimo
Nentanina ny mpanompon’Andriamanitra nandre ny antson’ny Tompo hianatra Katekomena manomboka ny 13 Desambra 2020
Nampahafantarina ny fiangonana ny toetry ny vola tamin’ny erinandro
Nisy ny filazana fiantsoana fanambadiana
Nisy nangataka vavaka fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana
Notononina ihany koa ny voka-dehibe.
Hira: Ny FFPM 306,1 no nohiraina nandritry ny fanatazan-drakitra
Ny FFPM 356,5 kosa no natao tamin’ny fanolorana ny rakitra
Atolotray Anao ry Tompo ny voninahitra noho ny famonjenao. Misaotra noho ny fitiavanao anay.
Entinay am-bavaka Aminao ny FJKM, ny Sinoda lehibe izay ho tontosaina ny volana Aogositra 2021, ny Sinodam-paritany ny fitandremana tsirairay syn y olana sedrainy, ny Mpitandrina, ny Evanjelistra, ary ireo rehetra izay manao ny asanao. Entinay am-bavaka Aminao ny Kere any atsimo.
Afanao ny mpianakavin’ny Tompo amin’ny finoana sy ny fanoloran-tena. Entinay am-bavaka ny ankohonana tsirairay, ny marary,ny firenenay manoloana ny olana sedrainy. Isaoranay Ianao noho ny fahavitan’ny fianaran’ny mpanomponao.
Izany vavaka izany dia farananay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo …
Talohan’ny fanononana ny tondrozotra sy ny nanolorana ny tso-drano dia nohiraina ny FFPM 748,1 ary tahorian’ny tsodrano dia nohiraina ny FFPM748,3.
Mpanao fafana: Andry RAKOTONDRAMBOA
Mpikirakira fanamafisam-peo: Rova HARENTSOA
Naka ny Sary: Lovatiana Josian
Mpandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana